ungakhe uthenge into encinci ye-smartphone eyaziwayo?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ungakhe uthenge into encinci ye-smartphone eyaziwayo?
Kukho & apos into enomdla ngokwenene malunga nomhlaba onomthunzi wokuveliswa kwe-smartphone. Nokuba lelona nani liphezulu kunye neyantlukwano (kukho imigangatho yokwenyani yokuthembeka ekukhupheleni), isantya apho kukhutshwa khona ii-clones zeeflegi ezithandwayo (ngamanye amaxesha ngaphambi kwento yoqobo!), Okanye ngendlela ezi xabiso ngayo, zikhona & apos soloko unento yokwenza ne-ogle kuyo, uzibuza ukuba kuya kufuneka ucinezele i & ldquo; Yithenge ngoku & rdquo; iqhosha.
Ewe kunjalo, xa sisithi inomdla, asithethi ukuba kufuneka uyilahle i-Samsung okanye iApple uye kwiNombolo 1 okanye kwiGooPhone. Umbuzo ngulo, xa ucinga ngamaxabiso aphantsi amaxesha amaninzi, ngaba iklone isesisithengiso sobudenge? Ngaba i-Hardware inokuba yoyike kangaka? Ngaba loo fowuni ingaba sisixhobo esilungileyo sokugcina ujikeleze kwimeko apho?
Ke, thina & apos sinayo loo rhawuzelelo amaxesha amaninzi, ukuze sibeke izandla zethu kwi-Galaxy S7 eqolo ekrokrisayo kwaye ubone ukuba ingabamba ikhandlela kwiifowuni zakho zemihla ngemihla. Uthini ngawe?
Ngaba ungathenga isimbo esinexabiso eliphantsi kwiflegi eyaziwayo?
Ngokuqinisekileyo akunjalo! Ndikhe ndihendwe ukuyenza ... Ngokuqinisekileyo, ukuba ixabiso eliphantsi kwaye lijonge ngokwaneleyo Ewe! Ndiyathanda ukusasaza kwaye ndenze uhlalutyo lwamaclones!Iziphumo zeVoti yokujongaNgokuqinisekileyo akunjalo! 75.6% Ndikhe ndihendwe ukuyenza ... 12.41% Ngokuqinisekileyo, ukuba ixabiso eliphantsi kwaye lijonge ngokwaneleyo 8.03% Ewe! Ndiyathanda ukusasaza kwaye ndenze uhlalutyo lwamaclones! 3.96% Iivoti ngo-1918
isamsung galaxy a6 uphononongo lwe-cnet
I-Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ifumana uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat eMelika
Ngaba iiapps zika-Android ziyaqhubeka nokuqhekeka? Esi sisombululo sincedile abaninzi ukulungisa ingxaki
Ungawutshintsha njani umbala weGalaxy S8 kunye ne-S8 + navbar
Ixabiso elingavulwanga le-Samsung Galaxy Z Flip yehla ngezantsi kwe- $ 1,000 kwiAmazon